U disk na-apụ n'anya na mberede n'oge eji - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>ig>U disk na-apụ n'anya na mberede n'oge eji
U disk na-apụ n'anya na mberede n'oge eji
U disk enweghị ike imeghe usoro mgbake data
faịlụ ndị dị na U disk na-apụ n'anya na mberede n'oge ejiri m, ekwere m na ọtụtụ ndị ọrụ enwetawo ọnọdụ ndị yiri ya, mgbe ahụ, U disk ahụ. Gịnị mere mgbe akwụkwọ ahụ kwụsịrị na mberede? Enwere ike weghachite faịlụ ndị dị na diski USB? N’okpuru, onye editọ ahụ ga-agwa gị okwu banyere otu esi weghachite faịlụ ndị gbapụrụ na diski U na mberede. Kedụ ihe ndị a na-ebutekarị na faịlị na diski U? Na ọha mmadụ nke oge a, U disk bụ ngwaọrụ nchekwa data ndị a na-ahụkarị U disk dị mfe, na-ebu ibu, na plọg na egwu nwere ike ịba uru n'ọtụtụ oge na ngwaọrụ. Agbanyeghị, site na njirimara ndị a nke U disk, U disk nwere mgbe ụfọdụ ọ ga-enwe nsogbu ụfọdụ site na oge rue oge dịka ọmụmaatụ, faịlụ ndị dị na U disk nkịtị na-apụ n'anya na mberede wee jikọta U disk na kọmpụta .. Mgbe emepee U disk ahụ, enwere oghere. Akwụkwọ ndị ahụ agaala. Ọnọdụ a bụ ihe a na-ahụkarị, mana ihe kpatara nsogbu a enweghị edozi.Oghazi onye nchịkọta ebe a na - achịkọta ụfọdụ ebumnuche ndị a na - ahụkarị maka niche gị. Ezochiri faịlụ a: Lelee akụrụngwa nke U disk ahụ na kọmpụta Ọ bụrụ na enwere oghere data, mana egosighi faịlụ ahụ, mgbe ahụ faịlụ nwere ike zoo. Ọnwụ faịlụ: Enwere ọtụtụ ihe kpatara ọnwụ data, dị ka nhichapụ, usoro, nje kọmputa, wdg. Ọ bụrụ n’ịchọpụta na faịlụ furu efu, kwụsị ọrụ ide ya ozugbo iji zere idegharị data furu efu. Ebibiri U disk: U disk nwere ọdịda anụ ahụ, dịka mgbaaka ebe nchekwa, isi ihe, wdg. Usoro ndị dị na U disk ahụ na-efu ụzọ Usoro Iweghachite otu: gosipụta faịlụ zoro ezo, folda na draịva
Thiszọ a dabara adaba maka iweghachite faịlụ zoro ezo. Ọ bụrụ na faịlụ anaghị efu na U disk ezighi, zoo aka na Metzọ nke 2 iji weghachite faịlụ ndị na-efu; nkuzi a na-eji sistemụ Windows 10. Ọrụ pụrụ iche nke nsụgharị Windows ndị ọzọ nke sistemụ nwere ike ịdịtụ iche, mana otu. Nke a abụghị ihe atụ. Nzọụkwụ mbụ: jikọọ U disk kọmputa ahụ, wee pịa akara ngosi “kọmputa a” na desktọpụ ugboro abụọ imeghe onye na-enyocha faịlụ. Kwụpụ 2: Chọta mbanye mbanye USB flash mbanye na faịlụ nchọta wee pịa leta mbanye mbanye imeghe USB flash mbanye. Nzọụkwụ 3: Pịa taabụ "View" taabụ n'igbe mmanya, wee lelee nhọrọ "zoro ezo ihe".
Faịlụ ndị dị na U disk ahụ na-efu usoro mgbake 2: Jiri sọftụwia data U disk weghachite faịlụ ndị furu efu
ọ bụrụ na faịlụ ndị ahụ apụtaghị na U disk na Ọ bụrụ na-ezoghị ya, enwere ike ihichapụ ya na ndudue .. Na nke a, ịnwere ike ịnwale iji sọftụwia data mgbake maka mgbake faịlụ. Mgbe ahụ faịlị nke U diski pụọ, kedu data mgbake data ka mma?
PreNkeji nbuputa nkebi
NextMgbake dị egwu site n'ụdị faịlụ disk U